SomaliTalk.com » 2011 » December » 11
Home » Archive Maalinta December 11th, 2011
Waxaa laga joogaa wax ku dhaw todobaad inta uu mootan yahay Shiikh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan, Ilaahay ha u naxariistee, iyadoo ilaa iyo hadda, ogaantay, aanu jirin qof si sharci ah loogu eedeeyey inuu geystay dilka. Su’aalo badan ayaa hadaba nala gudboon in la iska weydiiyo dhacdadaas iyo sida ay dareenka bulshada u kicisay. Ugu horrayn waxaa habboon, sida dad badani uga hadleen, in si qoto-dheer...
Sh. Cabdulqadir Dalmar C/raxman Alle ka cabsada Somaaliyey….
Dhiiga oo la daadiyo xaq la’ aan waa danbi aad uweyn oo naar iyo cadaab xanuun badan lagu muteeysanayo. Waxaa laga oohiyey hooyoyin, caruur, culumo, waxgard iyo waayeel. Waxaa qof kasta oo u danqanaya dadkaas la gudboon in uu ka qaybqaato joojinta dilka dadka soomaaliyeed ee muslimka ah. Read More →
Halkudheg: Dilka muslimkaa
Dhibatooyinka ”Roadmap” ku sheegga ka dhalan kara
Waxaan hordhigayaa walaalaha soomaaliyeed ee ka danqanaya ama ay dhibayaan dhigga iyo nabadgelyaxumida ka socda Soomaaliya iyo dhibatada dabadheeratay ee 20ka sano kor u dhaaftay ee ragaadisay Dalkeennii Hooyo . Arrimaha soo socda oo ah Dhibatooyinka uu soo kordhindoono Mashruuc ku sheega ”Roadmap”ee dawladda labada Shariif iyo Ina Gaas wataan. 1) Roadmap”ku Sharcidarri ayuu ku saleysan...
Shiikh Cabduqaadir Muumin, ShiikhXasan Maxamuud Takar iyo Shiikh Maxamed Ismaaciil oo ku eedeeyay Cabdiraxmaan Faroole in uu Ka dambeeyey Dilkii Dr. Sh/Axmad Xaaji Cabdi Raxmaan (Shir Jaraa’id )
Sheekh Cabdul Qaadir Muumin, Sheekh Xassan Maxamuud Takar, iyo Sheekh Maxamad Ismaaciil oo ka mid ah Culimadii diinta Islaamka kana soo jeeda Gobolada Pundland ayaa ku eedeeyay Cabdi raxmaan Faroole oo ah Madaxweynaha Maamulka Pundland in uu ka dambeeyey Dilkii Dr Shiikh Axmed Cabdiraxmaan islamrkaana waxay shirkooda Jaraaid ku sheegeen in aad uga xumaadeen dilkaas. Halkan ka dhegeyso shirka...
Sheekh Xasaan ayaa yiri “Aniga mowqifkayga ku aadan wadaadadda halganka maanta dunida kasocda colka la ah ee ladagaalamaya, anigu waxaan qabaa aduunkaba in la dhaafiyo, hadda kahorna waa idiin sheegay li’ana fitnaday ummadda ku hayaan baa kadaran. Halkan hoose kadhegeyso codkii [audio:http://somalitalkradio.com/cod/2011/xasaan.mp3] Malihi waa gaalo, Malihi dhiigoodaa banaan asaalatan, laakiin...
Ra’iisul Wasaaraha DFKMG oo la kulmay Masuuliyiinta Hay’ada Bisha Cas ee Kuwait
Warsxaafadeed ka soo baxay DFKMG Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay mas’uuliyiinta Hay’ada Bisha Cas ee Kuwait oo dhowaan soo gaaray Dalka, ka dib markii ay keeneen markab mucaawano siday oo ay la socdeen gawaarida gurmadka (Ambulance). Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa uga mahadceliyey Dowladda Kuwait sida ay u garab taagantahay shacabka...